Machine Manufacturers Ding Tai Kupisa Kutengesa Zvakatipoteredza Diki Sandblasting Kabhineti Yechinwiwa Pamusoro Pekuchenesa Ngura NePedal Tsananguro:
1.Abrasive sandblasting inzira yekufambisa jecha nekumhanya kukuru pachinhu kubvisa ngura, pendi, kana mamwe machira.
2.Mamwe marudzi emhando yeabrasive blasting materials iripo, yakadai semabhedhi kana sodium bicarbonate, asi abrasive sandblasting ndiyo nzira chaiyo yekushandisa jecha kubvisa zvinhu.
3.Muchina unokosha unodiwa kuti uite izvi, uye mushandisi wemuchina anowanzoda kudzidziswa kushandisa midziyo zvakachengeteka uye zvinobudirira.
4.Mushandisi achadawo kupfeka midziyo yekuchengetedza yakakodzera, senge magirovhosi, magirazi, uye mhino nemuromo mask, sezvo jecha rinogona kukuvadza hutano hwemunhu.
5.Iyo nzira yeabrasive sandblasting inotanga nekugadzirira nzvimbo iyo kuputika kunogona kuitika.
6.Sand ichafambiswa kubva pamushini, izvo zvinoreva kuti zvichave zvakakosha kuti mushandisi adzivirire nzvimbo yakapoteredza.
7.Mune zvimwe zviitiko, iyo abrasive sandblasting process inogona kuitwa munzvimbo ine mhepo inofefetera, nokudaro ine jecha rose nemarara.
8.Mune zvimwe zviitiko, zvingave zvakakosha kuisa pasi tarp kana pepa repurasitiki kuti uunganidze jecha rinoshandiswa uye kudzivirira mamwe maitiro ari pedyo.
Machine Manufacturers Ding Tai Kupisa Kutengesa Zvakatipoteredza Diki Sandblasting Kabhineti Yechinwiwa Pamusoro Pekuchenesa Ngura NePedal Application:
1.Sand blasting machine inokodzera zvose simbi, plastiki uye girazi zvigadzirwa zvepamusoro kurapwa.
2.Kubvisa oxide ganda, zvakasara burrs uye scratches zvinogona kushandiswa decoration chiedza, matte uye kusimbisa utariri.
3.Chenesa mold, polishing uye atomization kurapwa kwesimbi yesimbi, organic girazi uye zvimwe zvinyorwa.Inoisa tungsten yayo simbi nozzle ine hupenyu hurefu hwesevhisi.
Blast Cleaning Kusanganisira:
1.Kune cyclone separation system uye guruva rekubvisa system, separator ichaparadzanisa abrasive kubva kusimbi.
2.Dust kubvisa hurongwa inogona kutarisana uye kuunganidza emit guruva risingabatsiri, uye inogona kudedera kuchenesa guruva pakarepo.Guruva rinobvisa mhedzisiro yezvakanaka, kuderedza mutengo weabrasive uye kunatsiridza kushanda zvakanaka, uye hapana kusvibiswa kwezvakatipoteredza.
3.Suction sand blasting cabinet inokodzera kurapwa kwepamusoro kwezvinhu zvose zvesimbi, plastiki uye girazi ect.Bvisa ganda reoxide.
Machine Manufacturers Ding Tai Kupisa Kutengesa Zvakatipoteredza Diki Sandblasting Kabhineti Yechinwiwa Pamusoro Pekuchenesa Ngura NePedal Technology Data:
Dzvanya - In Type Sand Blasting Machine Technology Data
hardware, zvemagetsi, mold uye imwe diki workpiece pamusoro ngura kuchenesa,
Degreasing, deburring, descaling, kuchenesa pendi yepamusoro, pari zvino zvakanyanya
inoshandiswa kupfapfaidza, electroplate pretreatment process yekuwedzera coating
(plating) pamusoro Adhesion.
Electromagnetic pulse dust collector (sefa cartridge type)
50W-LED Kuputika-chiratidzo Chiedza
Sefa +Otomatiki Emission
White Ripple + Lemon Yero (Pendi yemotokari)
Vadivelu Comedy Shot Media
Diki simbi pfuti, girazi pfuti / jecha, Ceramic kupfura / jecha, Brown corundum, chena corundum etc.
Ding Tai Mamwe Series Machine:
Nezve Ding Tai Kambani:
Ding Tai Machinery Co., Ltd ndeyekutsvagisa nekusimudzira, dhizaini, kugadzira, musika, kuisirwa, sevhisi uye kutengeserana mune rimwe bhizinesi rakasiyana.
(2).Roller conveyor pfuti inoputika muchina
(4) .Waya mesh bhendi kupfura kuputika muchina
(5) .Catenary kuturika kupfuura nepfuti blasting muchina
(6).Simbisa pfuti inoputika muchina
2.Shot peening muchina
4.Sand blasting room uye zvikamu nezvimwe.
5.Dust muunganidzi midziyo
1.Surface yekuchenesa nzvimbo: kukanda, kugadzira, kupisa kurapwa, pamberi pemaindasitiri emuchina midziyo yekuisa pamusoro pekuchenesa.
3.Industrial dedusting nzvimbo nezvimwe.
Q: Uri kutengesa kambani kana mugadziri?
Manual sandblasting muchina 5-15 mazuva ekushanda.
Shot blasting machine ndeye 15-90 mazuva ekushanda.
Shot peening muchina ndeye 60-120 mazuva ekushanda.
zvinoenderana nehuwandu uye modhi yemuchina.
Mubvunzo: Unoedza sampuli yemahara here?
A: Kana yepfuti yekuputira bvunzo yekuchenesa, Hongu, isu tinoyedza sampuro mahara.Asi iwe unopa iyo yekutakura.
Asi kune iyo yekupfura peening simba bvunzo, iwe unopa iyo bvunzo yemahara.
Q: Ndeapi mazwi ako ekubhadhara?
A: Kubhadhara<=10000USD, 100% pachine nguva.Kubhadhara> = 10000USD, 40% T/T pachine nguva, chiyero
Mubvunzo: Chii chinonzi pfuti inoputika muchina?
A: Shot blasting inzira inoshandiswa kuchenesa, kusimbisa (peen) kana kukwenenzvera simbi.Shot blasting inoshandiswa
munenge maindasitiri ese anoshandisa simbi, kusanganisira aerospace, mota, kuvaka, kuwanikwa,
njanji yekuvaka ngarava, nezvimwe zvakawanda.Pane matekinoroji maviri anoshandiswa: kuputika kwemavhiri kana kuputika kwemhepo.
Q: Ndeipi yako mushure mekutengesa sevhisi?
A: * Injiniya enda kune mutengi fekitori yekumisikidza.
* Kudzidzisa maitiro ekuisa muchina.
* Kudzidzira kushandisa muchina.
Q: Ndeipi yako Pre-sales sevhisi?
A: * Kubvunza uye kubvunza rutsigiro.
* Tekinoroji mhinduro uye makotesheni
* Isu tinoshanyira fekitori yevatengi uye nhaurirano
* Mutengi anoshanyira Fekitori yedu uye tarisa kugadzirwa kwedu.
Q: Inguva yakareba sei yemhinduro yako mushure mekutengesa?
A: Nemaawa 0-24.
Q: Ndeipi yako muchina kugadzirisa kuyerera?
A: Raw material kune wire yekucheka kuCNC processing kune welding kupendi kuti vaungane kuyedza kumhanya
kurongedza kuenda kunotumirwa etc.
Kana iwe uchida kuziva rumwe ruzivo rweVagadziri veMichina Ding Tai Kupisa Kutengesa Kwenzvimbo Diki Sandblasting Kabati Yechinwiwa Pamusoro Pekuchenesa Ngura NePedal, Tinokugamuchirai kutibvunza:
Zvakapfuura: H Beam Steel Structure Shot Blasting Machine
Zvinotevera: Kuburikidza neType Shot Blasting Machine
Q326EA inotakurika ngoma inoputika muchina / pfuti...
Diki Inokambaira Inokanda Shot Inoputika Machine
Waya Mesh Conveyor Bhanhire Alloy Wheel Industrial ...
Otomatiki Steel waya mesh Bhandi Conveyor Type Sh...
Rubber Belt Shot Blasting Machine, Kaviri Hook Abrator, Rubber Belt Type Shot Blasting Machine, abrator, Kuburikidza neFeed Shot Blasting Machine, Hook Polisher Abrator, Zvese Zvigadzirwa